သိပ္ပံဒဿနပညာ – ၀၈ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← သိပ္ပံဒဿနပညာ – ၀၇
သိပ္ပံဒဿနပညာ – ၀၉ →
သိပ္ပံပညာနှင့်အတူ သိပ္ပံဒဿနပညာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သိပ္ပံဒဿနသည် သိပ္ပံအပေါ်သာ လုံးဝ မှီခိုလာကြောင်း လေ့လာသိရှိလာရသည်။
” .. it constructs theory of knowledge by the analysis of the results of science and is aware of the fact that neither the physics of the universe nor that of the atom can be understood in the terms of concepts derived from everyday life.”
သိပ္ပံရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှာ စကြ၀ဠာကြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အက်တွမ်တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြစ်ဖြစ် အသိပညာ ဖော်ဆောင်တဲ့အခါ နေ့စဉ်သုံး ဝေါဟာရများကို အသုံးမပြုရကြောင်း သိသာထင်ရှားလာသည်။ နေ့စဉ်သုံး ဝေါဟာရများမှာ လွန်စွာဝိုးဝါး၍ မတိမကျ၊ မပီမပြင်ဖြစ်ရာ သိပ္ပံသည် ၎င်းကိုအသုံးပြု၍ မရကြောင်း သိသာထင်ရှားလာသည်။
“Scientific philosophy, in contrast, refuses to accept any knowledge of the physical world as absolutely certain. Neither the individual occurrences, nor the laws controlling them, can be stated with certainty.”
သိပ္ပံဒဿနပညာသည် ရုပ်ယန္တရားဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသေချာခြင်း ဟူသည်ကို ငြင်းဖျက်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုသော အတွေ့အကြုံဖြစ်စေ ၎င်းကိုထိန်းချုပ်နေသော ဥပဒေသများကို ဖြစ်စေ ဖော်ဆောင်ရာ၌ တိကျသေချာမှု ဆိုသောအယူကို မယူကြချေ။ ဤကား သိပ္ပံ၏ သီးခြားလက်တွေ့ဆန်သော မရေရာသော ပညာကို လက်မခံသော အဓိပ္ပာယ်ကို သိပ္ပံဒဿနပညာ၌ ပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။
“Scientific philosophy has abandoned completely the plan of advancing moral rules.”
သိပ္ပံဒဿနပညာသည် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေသများကို ဖယ်ထုတ်သည်။
သိပ္ပံဒဿနပညာသည် အစဉ်အလာ ဆန္ဒတော်တော်များများကို အဓိပ္ပာယ် ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ လက်တွေ့နှင့် မယှဉ်သော စိတ်ကူးဆန်သော အတွေးအခေါ် အယူအဆများကို လက်မခံအပ်ကြောင်း သိပ္ပံဒဿနပညာက ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် အဓိကအားဖြင့် ဖြစ်တန်ရာချေရှိသော အသိပညာကိုသာ အခြေခံလျက် မေးအပ်သော သဘာဝဆိုင်ရာ ပညာရပ်များအား အဖြေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ယူလိုက်သည်။ ဤကား သိပ္ပံဒဿနပညာရပ်၏ ခြေလှမ်းသစ်များပင်ဖြစ်သည်။
Tags: Myanmar Posts, ဒဿန, သိပ္ပံ
This entry was posted in Philosophy of Science and tagged Myanmar Posts, ဒဿန, သိပ္ပံ. Bookmark the permalink.